Rafitra chlorinator sira, fitaovan'ny pisinina - Blueworks
Sandam-bola: USD $
Automation amin'ny pisinina
Accessorics amin'ny pisinina
Fanairana amin'ny pisinina
Rafitra rano madio
Fanavaozana vaovao sy fanadio ho an'ny taranaka mandimby tonga lafatra, tsy misy hafa amin'ny mivoaka avy amin'ny paompy ao an-tranonao. Matihanina ary manana traikefa amin'ny rafitra rano madio.
Tsy afangaro intsony amin'ny gazy klôro klôro na tablette, refesina na afangaro. Ankehitriny, blueworks dia manolotra vahaolana famonoana otrikaretina, afaka mahazo rano madio sy madio ary azo antoka indrindra ianao. Manana ny rafitra chlorinator sira sy ny ionizer ary amin'ny ozone ho avy izahay hanolorana ny kalitaon'ny rano faratampony.
Injeniera any Etazonia, nankatoavin'ny Energy Star, manam-pahaizana amin'ny fanamboarana motera sy mpamily paompy, eto ny Blueworks hanolotra izay tadiavinao amin'ny paompinao.
Mba hanohanana ny rafitra chlorinator anao miasa malalaka hanana kalitaon'ny rano madio sy madio, Blueworks dia manana soloina sela maro karazana. Izy ireo dia azo itokisana sy maharitra rehefa manamboatra 16 taona mahery isika.
Blueworks dia manana paompy hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha miaraka amin'ny fankatoavana ny California Energy Star sy ETL, ny fankatoavana Canda CSA manome toky fa hanana paompy lavorary ho an'ny pisininao ianao. Ny pump pump VSP dia ho be mpampiasa eo amin'ny tsenan'i Etazonia satria mahomby amin'ny fitsitsiana angovo.
Paompy pisotro Blueworks SPP1515VS
Fantsom-pisakafoanana rano mangatsiaka BLSC
Chlorinator sira BLPT
Paompy hafainganam-pandeha Blueworks IGP2115VS
Paompy hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha Blueworks AGP1515VS
Hafainganana miovaova ny fahombiazan'ny Blueworks Vsm Premium ...
Fanaraha-maso kimika Blueworks Pool
Kitapo Tester Salinity Blueworks
BLUEWORKS CORPORATION dia manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana sy ny famokarana fitaovan'ny dobo filomanosana feno. Amin'ny maha mpanamboatra lehibe anay, dia nanangana sampana any NC, Etazonia izahay ho an'ny serivisy aorian'ny fivarotana. Taorian'ny fanitarana efa an-taonany maro dia lasa iray amin'ireo mpamatsy kojakoja filomanosana lehibe any Etazonia izahay.
Ny vokatra dia misy, Chlorinator sira, fanoloana sela chlorinator sira, faritra ao amin'ny faritra misy ny sira, hazavana amin'ny pisinina, fanairana anaty pisinina, mpamaky dobo, paompy ary sns.
Raha ny filazan'ny Cdc dia tsy misy porofo manamarina fa ny Covid-19 dia azo aparitaka amin'ny olombelona amin'ny alàlan'ny fampiasana pisinina sy fandroana mafana. Ny fiasa marina, ny fikojakojana ary ny famonoana rano amin'ny dobo filomanosana sy kovetabe fandroana (ohatra, famonoana kôlônina sy ionizer) dia tokony hanala na hampiatoana ireo viriosy mahatonga ny Covid-19.
Miasa mazàna izahay mba hanomezana modely ho anao.
6 Andro isan-kerinandro, manomboka amin'ny 8:30 maraina ka hatramin'ny 4:30 hariva
Momba ny Blueworks